N'ogbe Galvanized grating steepụ ụkwụ nzọụkwụ Manufacturer and Supplier |Jintai
Aha ngwaahịa:Usoro nzọụkwụ steepụ nke galvanized grating
Nzọ ụkwụ steepụ dị na grating, efere, efere nwere perforated na ọla gbasaara.A na-etinye ya n'okporo ụzọ ma ọ bụ n'ala ụlọ, ebe ohere ịkwọ ụgbọ mmiri dị.Nzọ ụkwụ steepụ a dị ma ọ bụ na-enweghị etiti akụkụ.A na-emegharị ya ngwa ngwa n'elu mgbakọ efere ihe nrịbama diamond dị adị ma ọ bụ nke adịghị mma.Ka ọ dị ugbu a, a na-agbanye steepụ steepụ ozugbo na eriri ma ọ bụ eriri ugbu a ma ọ bụ nwee ike ịkụnye ya. Enwere ike ịnye oghere tupu e gwuo ya maka nrụnye dị mfe ma ọ bụ nwere ike ịkụnye na countersunk n'ọhịa, na-enweghị imebi elu.Ya mere, steepụ grating dị mma na ọnọdụ mmiri na mmanu dị ka mmanụ mmanụ, ụlọ ọrụ nhazi nri na ngwa mmiri.
Ịzọ ụkwụ steepụ na-emepụta elu na-eguzogide ọgwụ na-adịgide adịgide nke na-eguzogide ihe ndị dị ka griiz, uzuzu na mmanụ.Mgbe a na-emegharị n'elu steepụ kọmpụta, a na-agbanye steepụ na-adịghị ada ada n'ime arịlịka masonry.Ngwongwo steepụ aghọwo ihe nchekwa dị mkpa maka ịdị ogologo ndụ ogologo oge na nchekwa na-aga n'ihu. Ha dị na ọkpụrụkpụ nke 1/8" ruo 1/2" na omimi ọkọlọtọ nke 8"-12".Ọ dị mkpa na a na-eji nha nha na ụdị grating ziri ezi dabere na ogologo steepụ a chọrọ na ntinye.Tebụlụ dị n'okpuru bụ ntụzịaka bụ isi eji ewepụta ụdị grating ziri ezi achọrọ.
Mgbasawanye ụkwụ igwe steepụ steepụ grating steepụ steepụ steepụ gbadoro ụkwụ na steepụ steepụ igwe gbadoro anya.
★ steepụ ụkwụ na-enye a inogide ije elu ma atụmatụ uru dị ka grating nke na-ekwe ka drainage na ikuku eruba.Ọ na-eme ka nkwụsi ike na-amị amị ruo ọtụtụ afọ na-abịa.
★ steepụ treads nwere nchebe imecha dị ka agba ma ọ bụ galvanizing.Na-enweghị ọgwụgwọ elu a, steepụ steepụ nwere ike ịta nchara n'ụzọ dị mfe ma ọ bụrụ na mmiri kpuchie ya.Ya mere, a ga-edobe ya, tee ya ma ọ bụ na-ekpo ọkụ galvanized ka ọ ghara imebi.galvanizing na-ekpo ọkụ tinye bụ ụzọ kachasị mma maka nguzogide corrosion.
★ Ndị na-adịghị ele galvanized steepụ treads na-guzobere ka ọrụ nkọwa.Enwere ike ịmepụta usoro ụkwụ ka ọ bụrụ ọwa iji kpuchie steepụ na-amị amị dị adị.
★ steepụ treads na-adị mfe retrofitted n'elu ẹdude ihe, grating ma ọ bụ na-adịghị ize ndụ diamond checker efere mgbakọ.Enwere ike ịgbanye ya ozugbo na nzọ ụkwụ ndị dị ugbu a ma ọ bụ nwee ike igbachie ya.
grating bar steepụ bụ nnukwu nhọrọ maka ọtụtụ ngwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe.Ebe ndị dị nro ma ọ bụ serated dị na-adabere na mkpa ngo gị maka grating mmanya steepụ.Ụfọdụ ngwa a na-ahụkarị gụnyere: Flooring Walkway Catwalk Drain Deck Architectural.
Enwere ike ịmepụta nkọwa pụrụ iche site na ihe ndị ahịa chọrọ.
Ogwe ala nchara nchara, Ogwe grating, Galvanized Steel ntupu grating, Ogwe ụzọ nchara nchara, Steel Bar grating, Serrated Steel Bar grating,